को महसुल योजना "बीलाईन" - "लागि 1200» सबै
को "बीलाईन" को सबैभन्दा लोकप्रिय महसुल योजना एक, हामी मतलब धेरै संख्या जडान गर्ने क्षमता र एकल बिल, "सबै कुरा 1200 को लागि", अधिक ग्राहकहरु आकर्षित गर्छ। अनुकूल अवस्था सेवाहरूको दायरा, एक अद्वितीय प्रस्ताव समावेश - एक खातामा धेरै संख्या संयोजन - सबै यो TA मा embodied छ। यस लेखमा हामी "बीलाईन", "सबै 1200 को लागि," थप महसुल योजना हेर्न हुनेछ प्रयोग र जडान विकल्प सुविधाहरू कुरा हुनेछ।
हामी पाठकहरूलाई 'ध्यान आकर्षित मूल्यहरु अपेक्षाकृत को मास्को क्षेत्र छन्। यो अन्य क्षेत्रमा अलग-अलग हुन सक्छ भन्ने हो। वर्तमान डाटा सम्पर्क केन्द्र विशेषज्ञहरु, साइट अपरेटर मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ।
को महसुल "सबै 1200 को लागि", साथै यो लाइन कम्पनी "बीलाईन" को अन्य TP को मुख्य विशेषता एक खातामा धेरै संख्या संयोजन गर्ने क्षमता छ। यो कस्तो चाहनुभएको छ? मुख्य स्थानीय फोन नम्बर अन्य संख्या मा "बीलाईन" थप गर्न सकिन्छ (साथीहरू, परिचितहरू, सहकर्मी वा आफ्नै उदाहरणका लागि, अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ जो, ट्याब्लेट कम्प्युटर)। तिनीहरूलाई उपलब्ध महसुल प्याकेज मिनेट, सन्देश र मेगाबाइट समावेश। यस मामला मा, जबकि अन्य अझै पनि, सन्देश पठाउन कल हुन सक्छ र इन्टरनेट (आफ्नो व्यक्तिगत ब्यालेन्स पानामा धन को खर्च मा) सर्फ निलम्बित हुनेछ, सेवा प्रदान गर्न भने मुख्य कोठा।
को "बीलाईन" कम्पनी को महसुल योजना - "सबै कुरा 1200 को लागि" 1200 rubles को सदस्यता शुल्क लागि प्रदान गर्दछ। प्रिपेड र postpaid: त्यहाँ TP को दुई संस्करणहरु छन्। तिनीहरूलाई बीच फरक दोस्रो embodiment नगद प्रवेश अवधि एक चूक पछि (20 दिन चलानी पछि) छ भन्ने छ।
लागि 1200 »" सबै - नियम र TP को अवस्था "बीलाईन" द्वारा
गरेको को प्रिपेड सिस्टम सुरु गरौँ। गर्नुपर्छ TP किन्न चाहनेहरूको सदस्यहरू:
, अपरेटर को कार्यालय भ्रमण पहिचान कार्ड कब्जा र नयाँ नम्बर किन्न;
हालको संख्या संग TP गर्न संक्रमण लागि सम्भव विकल्प मध्ये एक प्रयोग गर्नुहोस्।
को TP परिवर्तन को लागत छ - 100 rubles। 40 rubles को लागि - (जो एक nizhepredlozhennyh तरिका स्वतन्त्र जडान गर्न सकिन्छ "सबै 1200 को लागि ',) सदस्यता शुल्क एक दैनिक आधार मा आरोप लगाएको छ कम्पनी" बीलाईन "को सर्तहरू अन्तर्गत। यसलाई निम्न सेवा प्याकेजहरू समावेश समावेश:
; (क्षेत्र र देशमा सबै मोबाइल अपरेटरहरु गर्न) 2000 मिनेट - कल
पोस्ट - 1000 एसएमएस (गृह क्षेत्र र राष्ट्रिय रोमिङ मा फेला सबै मोबाइल अपरेटरहरु);
इन्टरनेट - 10 जीबी (जो तपाईं देश को कुनै पनि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ)।
बन्द गरिएको छ लेख्न-बन्द गर्न TA द्वारा रकम आवश्यक खाता को अभाव मा (मुख्य सदस्य जोडिएको छन् जो कोठा, सहित संचार को सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दैन)।
थकित भएको "बीलाईन" गर्न टीएस प्याकेट कल समावेश पछि चार्ज गरिनेछ, र प्रति मिनेट अन्य संख्या लागत हुनेछ - 1.60 rubles, देश मा कुनै पनि एसएमएस - 1.6 rubles।
जब 10 यातायात नाघ्यो जीबी 70 एमबी (20 rubles।), मूल रूपमा एउटै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा स्वतः प्याकेज जडान गर्नुहोस्।
कसरी 1200 मा महसुल "बीलाईन" जडान गर्न
तपाईंले यी अवस्थामा रुचि र TP जडान गर्न इच्छा छ भने, त्यसपछि तपाईं यो आफैलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ", 1200 को लागि सबै" महसुल योजना "बीलाईन" सक्रिय त्यहाँ धेरै विधिहरू छन्:
व्यक्तिगत स्थानीय कार्यालय (वा यसको एनालग - मोबाइल उपकरणहरूको लागि आवेदन) मार्फत;
0781 डायल गरेर।
बाँकी मिनेट, सन्देश नियन्त्रण र इन्टरनेट ट्राफिक अनुरोध * 102 #, * 888 * 222 # सम्भव छ।
postpaid प्रणाली संग नियम र TP को अवस्था
एक postpaid संग ग्राहकहरु लागि बिलिङ सिस्टम प्रयोग TA को धेरै अन्य सर्तहरू प्रदान गर्दछ। साथै, यो चलानी मिति पछि सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्न (यो 20 दिन जारी छ) आवश्यक छ, र मासिक शुल्क सेवा प्रस्ताव राशि परिवर्तन भयो। को महसुल योजना पोस्ट-भुक्तानी ( "बीलाईन") "को 1200 को सबै" समावेश:
कल - 2200 मिनेट (प्रिपेड ग्राहकहरुको लागि जस्तै रेखाहरू साथ);
पोस्ट - 1000 एसएमएस (रूस मा रोमिङ हुँदा सहित देश, भित्र कुनै पनि गन्तव्यमा);
इन्टरनेट देश मा प्रतिबन्ध बिना (गृह क्षेत्र र राष्ट्रिय रोमिङ मा)।
आदेश मार्फत सक्नुहुन्छ प्याकेज बाँकी हेर्न र, शुल्क राशि जाँच चलानी लागि प्रतीक्षा बिना: * 110 * 45 #; * 110 * 321 # (रूपमा मार्फत साथै व्यक्तिगत ग्राहक वेब खाता)। यो भुक्तानी प्रणाली मात्र कार्यालय मा हुन सक्छ संग महसुल योजना जडान (यो पहिचान कार्ड आवश्यक हुनेछ)। यसरी यो rubles हजारौं को एक ग्यारेन्टी शुल्क भुक्तानी गर्न आवश्यक छ।
को महसुल योजना "बीलाईन 1200", पर्याप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया छ, कुराकानीमा आफु सीमित गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने मिलनसार सदस्यताका लागि एक वास्तविक Boon हुन सक्छ। एक खाता विभिन्न संख्या जडान गर्ने क्षमता संग, तपाईं धेरै ग्राहकहरु को ब्यालेन्स नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न उपकरणहरूमा सिम कार्ड "बीलाईन" प्रयोग वा परिवारका सदस्य र साथीहरूसँग आफ्नो TA को क्षमताहरु साझेदारी गर्न चाहने ती मानिसहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ। प्रयोगकर्ता बीच Dissatisfaction कहिलेकाहीं (, प्रिपेड सिस्टम लागि 10 जीबी को थकान पछि) कारण यातायात को स्वचालित नविकरणका लागि हुन्छ। 70 मेगाबाइट खाता 20 rubles (wherein, अन्य एक अतिरिक्त प्याकेट को थकान पछि सक्रिय हुनेछ) बाट कटौती गरिएको छ। समय आधारभूत प्याकेजको remnants नियन्त्रण गर्दैन भने, त्यहाँ खाता बाट रकम केही मात्रामा गुमेको एक जोखिम छ।
मोबाइल नेटवर्क: अवलोकन, सुविधाहरू, दर र समीक्षा
कति रूस गर्न पठाउने छ - समय र ट्रयाकिङ। रूस मा पार्सलहरू ट्र्याक
कसरी सेल फोन सुन्न, यो सम्भव छ? म अर्को व्यक्तिको मोबाइल फोन सुन्न सक्नुहुन्छ?
कसरी "बीलाईन" कोठा सबै सदस्यता असक्षम?
शेष पत्ता लगाउन "Tele2" को रूपमा? म कसरी सदस्य "Tele2" को ब्यालेन्स थाहा छ?
PON-प्रविधिको - निष्क्रिय अप्टिकल नेटवर्क
को स्नान मा मौज: आंतरिक डिजाइन, सजावट, फर्नीचर
दबाइ "इटन" (मलम): निर्देशन, अध्ययनहरू, समीक्षा
द्रुत मिठाई Lavash - strudel
Geoby C780: समीक्षा, फोटो, रंग र विनिर्देशों
एन्थ्रेसाइट: को भित्री मा रंग
एस Mikhalkov, "अनाज्ञाकारिताले भोज": पाठक गरेको डायरी र विश्लेषणका लागि सारांश
एक subordinated ऋण के हो?
संसारभरि टिप: तपाईँ पर्यटक जान्नु आवश्यक?
तापमान लक्षण बिना - आदर्श वा विकृति?